musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » Jet Airways 2.0: Iyo Nyowani Ndege
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • India Kupwanya Nhau • Investments • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Jet Airways akazvarwa patsva
Chero ipi nhau yakanaka pane yekumberi kwendege muIndia inoda kupemberera. Saka, hurukuro yekumutsidzirwa kweJet Airways mushure mekunge yapeta mapapiro ayo sezvaive muna Kubvumbi 2019, iri kuonekwa sechiratidzo chakanaka uye chinogamuchirwa kwazvo.
Chimiro chitsva chenhandare yendege chiri kuuya kuburikidza nenzira yerumutsiriro kuburikidza nekubhuroka.
Iyo yekutanga Jet Airways yaive muMumbai, uye kuzvarwa patsva kuchazviona zvichibva muNew Delhi.
Iri kutarisira kutanga mishoma-kutakura mashandiro epasi rose eanotakura muhafu yepiri yegore rinouya nekwaniso dzendege dzekunze munguva inotevera.
Iyo avatar nyowani - kana iyo kuberekwazve - inogona kuve nemuviri nekukurumidza kutanga kwegore rinouya, 2022, kunyangwe iri pamwero wakaderera.
Chimiro chitsva chenhandare yendege chiri kuuya kuburikidza neimwe nzira isina kuyedzwa kare. Jet Airways, raimbove zita rakasimba uye rinoremekedzwa, rinotora kumatenga nenzira yekubhuroka yerumutsiriro.
Pakutanga ichava mutakuri wekumba chete asi mukupera kwegore rinouya, Jet Airways 2.0 inogona kubhururukawo kuenda kunze kwenyika. Vatungamiri vatsva havana kutsanangura tsananguro dzehurongwa hwekushanda kwenyika dzese, zvisinei, zviwanikwa zveindasitiri zvakaratidza kuti nendege inogona kunge ichitarisa kune chikamu cheGulf kutanga kwayo kumhanyisa.
apo iyo yekutanga Jet Airways yaive yakavakirwa muMumbai, kuberekwa patsva kuchazviona zvichibva muNew Delhi. Icharamba iine kuve kwakasimba uye kwakakosha kuvepo muMumbai zvakare, yayo yekutanga base.
Iyo yevaridzi maitiro ichave zvakare akasiyana. Naresh Goet aimbove iye anosheedzera kupfura, asi iko zvino mubatanidzwa unotungamirwa neUAE-based Indian muzvinabhizimusi, Murari Lal Jalan, achave pachigaro chevanotamba. Jalan, anotungamira Jalan Kalrock Consortium (JKC) akawana ndege yeIndia yeJet Airways.
Mutungamiri wepamusoro akati ndege iyi iri kutarisira kutanga mashandiro epasi rose eanotakura muhafu yepiri yegore rinouya.
Sources dzinoti pakutanga, mubatanidzwa mutsva uchave nendege makumi mashanu mumakore matatu, nenhamba inotarisirwa kukura kusvika zana mumakore mashanu.
Kana chirongwa ichi chikazadzikiswa, vese mapepa nemabhizimusi vanozofara uye vachange vachitarisa zvirikuitika nendege yakazvarwa patsva zvine mutsindo.
Kuwedzera mumhepo kugona kuchave kusimudzira kukuru, kunyanya sezvo kusasimwa kweAir India kuchiri kutora nguva yakawanda.
Ndege iyi yakati yatotora vashandi vanopfuura zana nemakumi mashanu venguva yakazara uye iri kutarisira kukwira kune vamwe vashandi chiuru mugore regore rino remari. Iyo yekuhaya ichave nenzira yakatepfenyurwa uye ichave iri muzvikamu.